Warku ma idin galaa? Bar AMA Baro — Madaxda Gobolada, kuwa Muqdisho, iyo wakiilada bulshada caalamka ayaa isku raacsan heshiiska ay ku gaareen iney ku qeybsadaan saamiyada ay ku kala helayaan danaha ay ku hiigsanayaan doorashada ka. Waxa kaliya oo Soomaalidu xal ku heli karta ayaa ah, in amaankii la soo celiyo, markaas kadibna doorasho loo qabto umadda Soomaaliyeed, ama Degmo kasta oo Maamul samaysata la taageero markii amni guud la helana la dhiso dawlad dhexe oo metesha umadda soomaaliyeed oo ku timaada Doorasho xora. Aji shacab iyoujuuraan dowlad. The Somalia conference in Brussels on 16 September , the Federal Government of Somalia and its development partners endorsed an ambitious and ground-breaking New Deal Compact for Somalia, the Compact is a living document which is country-led and owned, it is structured around the five Peace- and State-building Goals PSGs. Maxaa taariikhda loo hagranayaa?
Ninka madaxda ah ee xumi marka xukunka laga eryo ka dib waxuu ka tagaa taariikh xumo waxuuna ku biiraa liiska kuwii ku fashilmey hogaaminta ee keligood taliyeyaasha aduunkana waxuu ka dhaxlaa magac xumo,taariikh mugdi ah oo madow iyo habaar dadkiisu uga yimaada Aakhirana waxaa ka danbeeya xisaabtii ilaahey. Don’t have an account? Runtii waxaad ka mid ahayd madaxda farakutiriska ah ee dadkooda ka helay ayidaad siyaasadeed oo buuxda tasoo ku siin kartay kalsoonida ah in aad dalka hore u socodsiiso, soo nooleeyso ifka qarannimada sii nuxuusaayay, soona celiso xasillooni bulsho iyo siyaasad deggan oo fadhida. Sida hadda loo dhigayo oo ah in aan aqoonsi helney , waxaa meesha ka baxay wixii Halgan ahaa ee ay dad badan ay Dhiigooda u daadiyeen si Xorriyad aan u helno ,waxayna arintu ku Biya Shubaneysaa in maanta Soomaaliya ay Xor Noqotey oo ah Sannadka , wixii waqtigaa ka horeeyey wixii Halgan la soo marey ay noqonayaan Hal Bacaad lagu lisey. Qormadan waxaan jeclaan lahaa inaan ku iftiimiyo arrrin aad u muhiim ah una baahan in si wacan wax looga qoro, lagana sameeyo Baaritaan iyo Diraasad, kaalinta ay leedahay ee ay la maqan tahay owgeed iyo meesha ay Bulshada uga jirto darteed, sidaba Cinwanka sare ku cad qormadeenna waxay ku qotantaa kuna taagan tahay labada garab ee kala ah: The Nazi salute or Hitler salute German:
Muqdisho waxaa ku nool shacab qiyaas ahaan ka badan bulshada ku nool todobo gobol oo ka mida goboladda Somalia. Waxaana dowladdaan dambe loogu wanqalay magac aysan umadda Soomaaliyeed hore u aqoon una adeegsan oo ah, Dowladda federalka ku meelgaarka ah,halkaas maxaa kaaga baxay??
Waxaa halkaas ka dhashay dagaal baarlamaanka dhaxdooda ah iyagoo gacanta isula tagay, iskuna garaacay wax kasta oo yeelay xaruntii moviee ku shirsanaayeen waa tii loo wada joogay waxii kala gaara, waxaa qaarkood soo gaarey dhaawacyo iyo dhibaabe.
Hadallada qiirada leh ee uu jeediyay aqoonyahanka geeriyooday waxaa ka mid ahaa isagoo sida ay Soomaalida u takooreyso dadka ku taqasusay farsamad gacanta ee sameeya kabaha, boorsada iyo qalabka gaba oo bulshada isticmaasho. Dhinaca kale cashara ayaa amaan balaaran usoo jeediyey ciidamada dowlada puntland oo uu sheegay inay soo hooyeen guul ay gaari waayen ciidamada AMISOM mudo sano ah islamarkaana ku booriyey inay dadaalka sii wadaan. Si kale, kanshadu halmar ayey ku soo martaa. Recognizing that mischief on the part of Villa Somalia, in his speech at the ribbon cutting ceremony for the expansion and upgrading of the Bossasso International Airport BIAformer President Abdirahman Farole wished for President Hassan Sheikh Mohamud to return Mogadishu with a change of heart and hoped for him to discard the clan-based 4.
Dumarka somalida waxay habeen iyo maalin ku hawlanyihiin sida ay u soo saari lahayeen ubad wanaagsanjacel dadkiisa iyo dalkiisa naftiisana wax tara ,, waxaad arkeesaa dumar badan oo caruurtooda kala soo cararay wadamada reer galbeedka oo caruurtooda ku haya wadamaha carabta si ay u badbaadaan u bartaan diintooda toosan.
Waxaa suuro gal ah in la hello nadab iyo Dowladnimo, haddiise Jidka Cadowga, gumeystaha iyo midka Qapbi aan ku socono waligeen kama baxeyno hoogga iyo halaagga aan ku jirno maanta. Ama maan Raxaneeyn wada noqono ayaa daalaga wada helaa qabiilada aan kalas hheganeeyno ee maanta 4. Labada degmo ee Galdogob iyo Jarriiban iyo qayb ka mida Gaalkacayo ee Gobolka Mudug ayaa hoostaga Puntland, haddana, waxaa dhacday sanadihii la soo dhaafay inaysan xaafadda Garsoor oo ka tirsan Gaalkacyo iyo degmada Galdogob aan xiriir wanaagsan kala dhaxayn Maamulka Puntland.
Ma ahan wax Axmad Madoobe ku gaar ah, oo waxaa la wadaaga inta ku awrkacsata siyaasadda, si ay u fuliyaan dacamooda sedburi. TV oo yuotube ah iyo www.
Degmada Caynaba oo Gobolka Sool ka tirsan waxay hoostagtaa Maamulka Somaliland, madaama aanay dhpof beelaha ku bahoobay waagii hore Puntland, kumana lahan sheegashada Beelnimo ee ay gobolka intiisa kale ku maamulaan.
Riwaayad Qurbo Joog Download
Ugu dambeyntii waxaa soo afjaray dagaalkaa guushi RPF ee uu hormuudka u ahaa hogaamiyaha qalbj Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame oo lagu sheege in uu Rwanda ka dhigay dal horay u socda sheekadooduna u noqotay dalalka kale ee Africa in ay ku daydaan Rwanda oo gaartay horumar dhan walba si la mid ah dalaka kale ee sierra Leone iyo Liberia. Dhaqanka Diplomaasiyaddana waxaa ka mid ah Protocol loo ilaasho dal kasta madaxdiisa wixii ka caaggan diintooda iyo dhaqankooda.
Marar badan, warbixinnada lagu lafaguro; musuqa, dibaadinnimada, maamulxumada kovie ayaan safka hore ka galnay Soomaali ahaan, haddana, waxaan filaa inaan la is weydiin; qaybta ay ku leeyihiin waxa nagu xeeran, ee dawlado iyo ururro leh.
Jog qaban-qaabada Doorashada madaxweynaha Soomaaliya waxaa ay araajida murashaxnimo ka qabteen, shahaadada murashaxnimadana siiyeen ilaa 24 murashax, mid ka mid ah murashaxiintan waxaa uu noqon doonaa madaxweynihii 9aad ee Soomaaliya, ninka la dooran doono, waxaa looga fadhiyaa in 4ta sano ee soo fukl uu Soomaaliya ka dhigo dal jira oo magac leh!! Madoobe soow ma ah ninka eey Kenya kubadalatey kabo-qaadkeedii isaga kahoreeyey [Prof.
Moment Research & Consultancy – Bar Ama Baro
Dabcan waan u cudur daaraya,oo wakhti jahiligii dadku way isku xoog sheeganjireen, si badheedh ah ayaa xoolaha lookala dhici jirayarimaha caynkaas ahina dumar shuqul kuma laha oo wax dhisid mooyaane dumar wax dumid iyo dulmi kama qayb qaadan karaan oo ilahay ayaa naxariis iyo nabad jacayl ku abuuray.
Soomaali baad tahay sababtoo ah markaad la joogto dadka aan kugu qabiilka ahayn, waxaad ku celcelisaa inaad tahay qof Soomaalida u siman tahay oo qabyaalada neceb waddanina ah.
Madaxweynuhu waa nin Muslim ah, dal iyo dad Muslim ahna wuu matalayaa. Bal adigoo miyirqaba qoraalkeyga hoos u raac. Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ku tillaabsatay guulo la taaban karo intii ay wadatay magacan J. DHAQANKA aan qeexee; waa oday dhaqameedka soomaaliyeed, oo inkastoo ay qabiillo matalaan, haddana, si ka gaar ah beelohooda uga wakiil ah siyaasad ku sheegga soomaalidu dhex sabbayneyso.
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga vhoof ee Soomaaliya Yeeriskii gaashaanbuurtii Warsow. Mise waa shaqsi kaloo cusuboo hadda iyo koow la inabarayo? Dhaqangalka qodobkaan waxaa loo maray hanjabaado loo adeegsaday gudoomiyaha baarlamaanka oo uu ku eedeynayey wakiilada bulshada caalamka, iyagoo loo soo vhoof in doorkoodu ku koobnaado goobjoogayaal fududeeya heshiisyada ay ku kala qeybsanayaan madaxdu saamiyada doorashada ka.
Allalayle Prof-ku wax dhihid ayuu u baahan yahay, ayaan waxaan dul sitaagay farshaxanka weyn ee Amiin Caamir oo ka hadlaya heesta iyo kooxdaba, markaan dhagaystay hadalkiisii ayaan iri: Halkan Guji si aad Af Ingriisi ugu Akhrisid.
Ugu horrayn, bulsho waliba waxay leedahay astaamo u gaar ah, tilmaamo u gooni ah iyo sifooyin aan cidna la wadaagin.
Markaan dib u dheehanno, waxaad ahayd shakhsi ku cusub siyaasadda Soomaliya oo aan raad dheer ku lahayn taariikhda xun ee siyaasadeed ee uu dalka soo maray, arrintaas oo ku siisay fursad aad uga hormarto dadkii tartanka siyaasadda kugula jiray. Gadabuursi iyo flul qurba joogta Awdal state Haddaba qaar ka mid ah waddamada beesha caalamka ayaa wado dadaalo aay rabaan in aay ku qanciyaan madaxdweynaha JFS Xasan Sheekh in uu ka tanaasulo in mar labaad dib isku soo sharaxo iyadoo arrinkan uu fududeyn doono in iyk is aamino lana helo qaab aan joot ku jirin oo doorasho lagu saleeyo.
Ha moogaan oo mivie lagaaga sheekeyn Filmkii aad mudada Sugeyseen oo la magac baxay Qurba joog iyo qalbi Dhoof raba oo lagu soo bandhigi doono magaaladan …. Iyadu waxay rabtaa, xushmad, isna wuxuu rabaa, xaarxaaro. Maryan Qaasin; ayaa toosh weyn ku ifisay mashaakil xukuumadda dhexdeeda ka hulaaqaya, kaas oo lagayaabo in maareyntiisu adkaato haddii uu dhaafo heerka uu taagan yahay. Talo maxaad u haysaa, oo lagu toosin karaa qalloocaa noo wada muuqda, qaybo ka mid ahna, in aad soo aragtay ama dhagaysatay ka sokow, aadba suubatay, dadkana wada tustay?
Hadaba waxaan jaleecaynaa kaalinta haweenku kuleeyinhiin horamarka bulshadaiyadoo inta badan omvie tilmaamo uun kalinta raga, markaan sidaa leeyahay ugama jeedo waxaa la ilaaway kaalintii dumarku kulahayeen horamarka, ee waxan is idhi malaha ragu haweenkay u dhaafeen inay wax ka Qoran kaalinta ay ku leeyihiin horamarka bulshada.
You need to sign in to comment on this video. Sign Up Log In. Waxayna markii dambe la bexeen qabiil la yiraa 4ta ilma hebel iyo adeerkood. Hubaal inay ka duwan tahay qaabkii hore, Xukuumaddan la sugayana arki doonnee beenta ay sheegto.